बहुगुणी २ जातको धानमा बाला लागेन, के यस वष पनि किसान बिउमा ठगिए ? – Krishakkhabar
बहुगुणी २ जातको धानमा बाला लागेन, के यस वष पनि किसान बिउमा ठगिए ?
Tuesday, September 15th, 2020 | krishak khabar
कैलाली ३० भदौ
कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिका ९ का किसान घनश्याम पौडेलले यसअघि कृषि प्राविधिककै सल्लाहमा गरिमा जातको धानको बिउ लगाएका थिए । त्यो वर्ष गरिमा जातको धानको बिउ लगाएका पौडेलसहित हजारौँ किसानहरू बिउ कै कारण धानमा बाल नलागेर धेरै समस्यामा परे ।
यस वर्ष भने उनले गरिमाको विकल्पमा कृषि प्राविधिककै सल्लाहमा ‘बहुगुणी–२’ धान खेती गरे । तर पौडेल अहिलेदेखि नै चिन्तामा छन् । वरिपरिका खेतमा धानका बाला झुलिसक्दा पनि उनको खेतमा अझै बाला लागेको छैन ।
‘कृषि शाखाले नै बाँडेको धान लगाएका हौँ । गरिमा धानमा जस्तै यस पटक पनि धान फल्दैन जस्तो छ,’ उनले भने, ‘अझैसम्म बाला नलाग्दा हामी चिन्तित छौँ ।’
पौडेलले लगाएको बहुगुणीमा बहुरंग देखिएको छ । कुनै भर्खर बाला लाग्दै छ । कतै बाला लागेको छैन । कतै पाक्दै छ । ‘हामीले एकैदिन एकैठाउँबाट ल्याएर लगाएका हौँ कसरी मिश्रित भयो ?’ पनि प्रश्न गर्छन् । ’
थोरै जग्गामा अनुदानको धानको बिउ लगाएकी घोडाघोडी नगरपालिका–१ की उजेला खड्कालाई यस वर्ष के खाने भन्ने पीर परेको छ । खड्काले भएको ४ कठ्ठा क्षेत्रफलमा पूरै बहुगुणी–२ धान लगाएकी छिन् । तर, उनले पनि धानमा बाला लाग्ने छाँट देखिकि छैनन् । ‘यस वर्ष के खाने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भनिन्, ‘अझै बाला लागेन भने त हामी भोकै पर्छौं होला ।’
घोडाघोडी–१ की ईश्वरी ढकालको पीडा पनि उस्तै छ । ‘अरू धानसँगै पाक्ने भनेर धान ल्याएका हौँ तर अरू पाक्न लाग्दासमेत अनुदानमा पाएको धानमा बाला लागेन,’ ढकालले भनिन् । उनले १२ असारमा १५ कठ्ठामा अनुदानको धान रोपेकी हुन् । धान लगाएको ४५ दिनसम्म पनि बाला नलागेको उनले बताइन् ।
‘वरपरका सबै धानहरू काट्ने हुन थालेका छन् । हाम्रोमा भने बाला नै लागेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त कृषि शाखाले नै ठग्यो ।’
कृषि शाखा भन्छ बहुगुणी ढिलो फल्ने धानको बाल लाग्छ
घोडाघोडीस्थित कृषि शाखाले भने अरू धानभन्दा केही समय ढिलो फल्ने भएको हुँदा बाला नलागेको जनाएको छ ।
‘केही किसानले हामीलाई पनि यो गुनासो गर्नुभयो,’ घोडाघोडी नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख जनक धामीले भने, ‘हामी पनि हेर्ने गएका थियौँ । ढिलो पसाउँछ । तर, पसाउँछ । तपाईं ढुक्क हुनुहोला ।’
बहुगुणी–२ जातको धान कैलालीको माटो सुहाउँदो र हावापानी सुहाउँदो भएको धामीको दाबी छ ।
उसो त धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रै पनि बहुगुणी–२ जातको धान लगाएका किसानहरूले बाला नलागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कृषि शाखाले मात्रै होइन कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि किसानलाई बहुगुणी–२ जातको धानको बिउ दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहराले धानमा बाला नलागेको बिषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामीसँग औपचारिक रुपमा अझै गुनासो पुगेको छैन । तर, बाला लागेन भन्ने सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘हामी पनि यो विषयमा बुझ्दै छौँ ।’
उनले अरू धानभन्दा ढिला पाक्ने भएको हुँदा पनि बाला नलागेको हुन सक्ने बताए । सूचना अधिकारी बोहराले बहुगुणी १४० देखि १५० दिन भित्रमा पाक्ने दाबी गरे ।
तर, अरू धानभन्दा ढिलो पाक्दा किसानलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ । ‘अरू सबै धान काटेर त्यो बाँकी भएपछि किरा र फट्याङ्ग्राले उत्पादन हुन दिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी पनि किसानलाई समस्यै पर्छ ।’
कैलाली र कञ्चनपुरका किसानहरुले ं
प्राय ११५ देखि १२० दिनमा फल्ने धान लगाइरहेका छन् । कैलाली–कञ्चनपुरमै उन्नत जातको भनेर तयार गरिएको बहुगुणी–२ मा अझैसम्म बाला नलाग्दा यस पटक उत्पादन घट्ने आशंका गरिएको छ । स्रोत ः अनलाईन खबर
TOTAL PAGE VIEWS: 958888